Ciidama Kenya oo dilay 73 ka tirsan dagaalyahaniinta al-Shabaab - Sabahionline.com
Ciidama Kenya oo dilay 73 ka tirsan dagaalyahaniinta al-Shabaab
Ciidamada Difaaca Kenya (KDF) ayaa Arbacadii (15-kii August) 73 ka tirsan dagaalyahaniinta al-Shabaab ku dilay dagaal ku dhexmaray tuulada Faxfax-dhuun ee gobolka Gedo oo ku yaal koonfurta Soomaaliya, sidaana waxa sheegay Daily Nation-ka Kenya.
Kenya oo dhaleecaynaysa sheegashada al-Shabaab ee dilka lahaystayaashii Kenyaanka ahaa
Af-hayeenka Ciidamada KDF Emmanuel Chirchir ayaa tirada dhimashada ku xaqiijiyay qoraal uu ku diray alladda Twitter-ka, isaga oo sheegay in ciidamada Kenya ay qabsadeen in ka badan 100 qoryaha AK-47 ka ah.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegatay in ay dishay in ka badan 60 askari oo ka tirsan kuwa Kenya iyo Soomaaliya.
Tirada dhimashada ee labada dhinac ayaanan laga xaqiijin jiho madax-bannaan.
Ugu yaraan laba ka tirsan ciidamada Kenya ayaa ku dhaawacmay dagaalka, kaasoo biloowday markii ay al-Shabaab weerartay xero ay ciidamada Kenya ku leeyihiin Faxfax-dhuun habeennimadii Arbacada. Al-Shabaab ayaa qorsheeysay in ay dulmarto xerada, haseyeeshee ciidamada Kenya ayaa xog horudhac ah ka helay weerarka dabadeedna jilibka u aasay si ay ula dagaallamaan, sida uu sheegay wargaysku.
Askarta dhaawacantay ayaa loo soo duuliyay Nairobi Khamiistii si halkaa loogu daweeyo.
August 19, 2012 @ 04:33:54PM
Waxan usoo jeedinayaa ciidamada difaaca Kenya inay kooxda alshabaab cagta mariyaan oo ay garaacaan, waxaanan leeyahay anagu waxaanu diyaar u nahay in aan qadiyadan wacan naftayada u hurno.
August 19, 2012 @ 03:55:26AM
Hambalyo ku socota ciidamada difaaca Kenya
August 18, 2012 @ 02:51:04AM
Aakhirka kooxda alshabaab waa laga guulaysan doonaa oo waxa jabin doona ciidamada difaaca Kenya iyo kuwa Amisom (bilaw kastaa dhamaad buu leeyahay).
August 18, 2012 @ 01:48:04AM
Waxay ila tahay in jahligu uu dhibtooda ka dambeeyo